Nagu saabsan - JIANGSU RICHENG MEDICAL CO., LTD
Casriyeynta waxsoosaarka, inbadan oo la isku halleyn karo, la istcimaali karo, kalsooni badan leh, awood badan leh
Shahaadada ISO13485 + CE, RoHS iyo helitaanka shahaadada
15 Tusaalooyinka curinta tusaalaha
Waa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha
Jiangsu Richeng Medical Co., Ltd. oo ah shirkad ka kooban maalgashi kali ah oo uu sameeyay Jiangsu Richeng Rubber Co., Ltd. waa soo saare caafimaad oo xirfad leh. Iyada oo loo maro cilmi-baarista sheybaarka caafimaadka, horumarka iyo wax soo saarka, waxaan bixinaa agab aaladda lagu kalsoonaan karo, oo aamin ah oo wax ku ool ah. Shirkadda waxay leedahay soosaarid iyo qalab dhameystiran, tikniyoolajiyad soo sareysa, oo leh maamul tayo sare leh, tikniyoolajiyad iyo shaqaale soo saar.
Shirkadda waxay sameysay nidaam dhameystiran oo shahaado caalami ah oo ISO9001 ah, waxayna u gudbisay shahaadada tayada sare ee ISO13485 iyo shahaadada CE, iyadoo ujeedkeedu yahay inay siiyaan macaamiisha alaabada tayada iyo adeegyada heerka koowaad. Iyada oo in ka badan 20 sano oo waayo-aragnimo ah ee agabka, cilmi baarista iyo horumarka, naqshadeynta injineernimada, horumarinta wax soo saarka iyo maareynta mashruuca, shirkadaheena waxay ku jirtay jagada hoggaanka warshadaha, alaabooyinkayagana waxaa loo dhoofiyay in ka badan 20 dal iyo gobollada, oo noqday saaxiibka la doorbido ee hoggaamiyeyaasha wershadaha badan.
Waxaan leenahay labadaba kooxda R&D gudaha iyo dibedaba, kooxdayada R&D gudaha waxay inta badan ku daraan injineerrada socodka in kabadan 10 sano oo waayo-aragnimo ah; Kooxdayada R&D ee dibedda ah waa koox khubaro caafimaad ah oo khibrad caafimaad u leh. Waxay diiradda saaraan tayaynta macquulka ah ee alaabooyinka jira iyo abuuritaanka alaabada cusub.
Richeng waxay haysaa 15 curiyeyaal moodello abuur
10 sano oo waayo-aragnimo injineernimo ah